Izimfihlo zezinkanyezi "zenkanyezi" ze "okungezona inkanyezi" zomphakathi
Imfashini Yabesifazane Isitayela
Uke waphawula ukuthi izibukeli ezihlakaniphile zibukeka kanjani, kungakhathaliseki ukuthi zihamba ngekhabethe elibomvu noma ziyophuza indebe yekhofi ngenkathi isebenza? Abazange bazalwe kanjalo. Banezikhali eziyimfihlo: izitayela zezinkampani ezinezixazululo ezilungiselelwe ezenziwe ngokuzikhandla nezinkombandlela zokwenza "izinkanyezi" zibukeke zingcono. Awudingi ukuzibuza ukuthi ungabheka kanjani okumangalisayo. Nazi ezinye izincomo zama-stylists, okulandelayo ongabheki nakakhulu kunabakuhlonishwayo, ngisho noma umcimbi kuphela kuwe umsebenzi ojwayelekile ehhovisi.
Khetha izithende zakho. Njengomunye umklami we-fashion waseMelika wathi: "Gqoka izicathulo ngezithende, ngisho noma ziphansi kakhulu." Uma uphelele isithende, uzobukeka ujule kakhulu, ngoba akugcini nje ukukhulisa imilenze, kodwa futhi kukuphoqa ukuba uphinde uhlasele amahlombe - ababulali bokuzimela - ekusebenzeni kwakho. Ngokukhethekile isithende sihlangene nesiteji. Lesi sitayela esihlelekile sithatha isinyathelo ngehora elincane futhi sinikeza ukwesekwa okungaphezulu emigodini yezinyawo.
Dala isimo sakho esihle. Izingubo kuphela zingakusiza ukwenza lokhu. Uma unamaqhwa avulekile nesikhumba esincanyana kakhulu, thatha ingubo noma iphoyinti elizokwenza "lifihle" indawo encane kunazo zonke emgqeni wesibalo sakho. Mhlawumbe kuzomele uzame amanani amaningana kanye nezitayela ngaphambi kokulinganisa okulungile. Kwabesifazane abanamahlombe amakhulu, ingubo efana noV ikhetha kakhulu. Intamo izobonakala ibe yinde futhi inhle kakhulu, futhi isibalo - slim ne-taut.
Nciphisa ukwehluleka kwakho. Uma ungajabuli ngezinyawo zakho, gqoka izibhulu ezikhanyayo noma ama-jeans nge-scrapes (ukuhlekisa). Imibala yepale nemininingwane ngokushesha idonsela iso. Kanti futhi ugweme ama-outliers, isibonelo, amabhulukwe anezikhwama ezinqulwini akhulisa ivolumu yengxenye enkulu yemilenze, lapho esevele ekhulu kakhulu. Ubukhulu besisu buzosiza ukufihla eziqongweni kanye nehembe elinemigqa ebanzi esihlalweni.
Ungagwemeli ilineni lokulungisa. Ungaqiniseka, abesifazane abafana ne-Hollywood ngeke benze isinyathelo ngaphandle kokulungisa isibalo sabo ngelineni. Imikhiqizo yanamuhla yemikhiqizo edumile - ngaphandle kwezingwegwe, amabakaki, izibopho, ezingashiya izivunguvungu emzimbeni wakho. Thatha isikhathi sokuthatha ukuthi yini okufanele ihambisane nesibalo sakho, nesabelomali sakho. Uma uthenga, ungakhohlwa, uma kukhona okubonakala kunzima kakhulu esitolo, bese uhlala emahoreni amane ephathini kuzobonakala kubanzi kaningana noma kabili. Khetha ubukhulu obukhulu, obugcina umuzwa wenduduzo.
Okuthakazelisayo kuthola ezindaweni ezingalindelekile. Bheka isifiso ngenxa yomnyango osemusha we-boutique fashion. Kulapho uzothola izesekeli ezisezingeni eliphezulu hhayi ngaphansi komnyango wesifazane. Futhi emnyangweni wezambatho zamadoda, hlolisisa ama-t-shirts abahloli abakhulu kakhulu. Izindwangu zangaphandle zabantu, njengombuso, ukusika isikwele, futhi uma zithathwa nge-waistband okhalweni, bese kuhlangene ne-leggingsamili izinwele ezincane zizobekwa kahle. Kusuka kulabo abathengwa ezitolo zezinhlamvu zamasalele zamaparele namabhande, ungenza umgexo owodwa.
"Zatarivaytes" ekuthengisweni kwonyaka. Kungakhathaliseki ukuthi kuzokwenzenjani ukuwa okuzayo, uzohlale udinga ama-Black T-shirts azoba yisisekelo kunoma iyiphi i-kit. Uma kukhona izaphulelo ezinkulu ezembatho zasebusika ezifana nezindwangu zoboya, ama-sweaters, kunengqondo futhi ukuzithenga.
Landela umkhuba - "fikela iphuzu". Yiqiniso, awufuni ukubheka ubudala, ngakho-ke akufanele uthenge izingubo eziphathekayo uma ungahambisani nesibalo sakho noma awuhambisani nobudala. Isibonelo, iziketi ezifushane zihlala zifanelekile, kepha uma ungengumfana osemusha, "ungaphuthelwa" ngokukhetha i-wardrobe. Izitayela zeluleka ukunaka izitayela ezinamasentimitha ambalwa ngaphezu kwedolo. "Qinisekisa ukuthi ingubo ihlanganisa ingxenye enkulu kunazo zonke zamathanga bese ukhetha umbala wesikhumba sesithende ukuze wengeze ubude emilenzeni yakho" - isincomo esengeziwe esivela kumunye wababonisi.
Thenga usayizi wakho. Ngethemba lokufihla ukwehluleka kwabo, abesifazane abaningi bathola izingubo ezinkulu kakhulu kubo. Eqinisweni, izingubo ezingcolile zenza abesifazane bakhule, futhi abancinci, ngoba bangenasimo. Ungafihli ngemuva kwamakhilomitha wendwangu. Esikhundleni salokho, bheka izingubo ezingakwazi ukumboza "ukuvuna" kwalesi sibalo, isibonelo, ijazi elinamathelweni okhalweni. Uma uthenga okuthile okuqukethe i-lycra, ikakhulukazi ijee, bese uthatha i-tozamer, okuncane kakhulu lapho ufanelekile. Bazokwelula ukuze bafanise umzimba wakho, kanti usayizi omkhulu (lowo owawusekugcineni esitolo) uzokwelula emavikini ambalwa.
Yini okufanele ugqoke uma imilenze iphikisiwe?
Yini okufanele ugqoke izimbadada emgqeni?
Izingubo zokugqoka zentwasahlobo ka-2010
Izingubo zesitayela se-Punk
Isitayela S Swag (Swag) - siyini nokuthi siyilandela kanjani
Abasebenzisi be-intanethi baxoxa ngomshado osheshayo kaDmitry Tarasov no-Anastasia Kostenko, isithombe
Uchungechunge olungcono kakhulu lwangaphandle
Indlela yokuhlela isikhathi sakho ukwenza konke
Indlela yokwenza ngokushesha umuno omncane
Ukunakekelwa kwezinwele emva keratin ukuqondisa: zokupheka best okuzenzelwe
Isivivinyo sabesifazane besimfashini: iqoqo le-Artdeco Objects of Desire
Izigqoko ezinde ezifashini zokuphothula iziqu 2016
Ingabe umbono ungaba nesisekelo sezinzwa?
Ikhekhe "I-Tale yaseBusika"
Amabhati okuqinisa izipikili
Indlela yokukhetha isipho kumuntu osemusha
Izipikili ze-Brittle nezikhukhumezayo
Indlela yokugqoka ijaji
Ukuthuthukiswa kwengane eminyakeni emibili
Izimangaliso - "amaphayi" amancane
Through the Glass Looking
UMikhail Muromov - "okhuphuka"